ပူတာအိုဆေးရုံက မွေးခန်း အကြောင်း လူနာရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ မကြောက်တမ်း ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ရင်ဖွင့်ချက်. – Zartiman
မပြောချင်တာကျမကြောက်လို့ ငြိမ်ခံနေမယ့် လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားပါ။ ကျမလူနာ နဲ့ ပတ်သက်လာလို့ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဘယ်အချိန်မဆို threshold (ခံနိုင်ရည်) တခုရောက်ရင် သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါ ကြိုပြောပါမယ်။ ဘယ်သူမှ ပို့စ်ဖျက်ဖို့ လာမပြောနဲ့ မကြိုက် ရင် မဖတ် ပါနဲ့နော်။ပူတာအိုဆေးရုံအား ပထမဆုံး စိတ်ပျက် မိခြင်း အကြောင်းကတော့၊ မွေးခန်း ရေမလာပါ, ပထမဆုံးပုံက မွေးတဲ့ ကိရိ ယာ instruments တွေ, မွေးပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ဆရာမတွေ လက်ဆေးရတဲ့ ရေကန်ပါ။
ရေသိုလှောင်ထားတဲ့ ကန်ထဲက ရွံ့ရေတွေပါ။ အဲ့တာ ကို တွေ့တွေ့ချင်း ကျမ ဆေးရုံအုပ်ကို ဖုံးဆက်ပြီး complaint တက်ပါတယ်။ကျမ စရောက်တဲ့နေ့ကတည်းက အားလုံးလိုက်ကြည့်ပြီး အခါခွင့်သင့်တုံးကလည်း တခါပြောပြီးပါပီ။ခုဆက်တာ ညတချက်ပါ။ ဆရာပြောလို့ ရလားရှင့် လို့ အရင်မေးပြီး သူဘက်က ရပါတယ် ဆိုမှ ကျမ ဖုန်းပြောတာပါ။လူနာအတွက် ဆရာဝန်က ၂၄ နာရီ အသင့်ရှိရမယ်လို့ ယူဆ ပါတယ်။ တွေ့တဲ့ပြဿနာကို on the spot ဖြေရှင်းလိုက်တာဟာအားလုံးအတွက် အထိရောက်ဆုံးပါ။
ဒါပေမယ့် ဆေးရုံအုပ် ကျမဖုန်းကို ပြန်ပြောလိုက်ပုံက ခေတ် အဆက်ဆက် ဒါမျိုးပဲလုပ်နေကြတာပဲ။ နင်က လာတာ ဘယ်လောက်ကြာ သေးလို့လဲဘာကောင်မို့လဲ လူနာတွေအတွက် ဘာများလုပ်ပေးနိုင်သေးလို့လဲတဲ့။ ကျမ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးနေလို့ကိုယ့် လိပ်ပြာ လုံပါတယ်။ နောက်လည်းလုပ်ပေးမှာပါ။ ကျမက ပြီးပြီး ရောလုပ်မယ့်လူ တစ်နှစ်ကုန်သွားပြီးရော လုပ်မယ့်သူလို့ ရှင်ထင်ရင် မှားပါလိမ့် မယ်။ ပြီးတော့ဟုတ်ပါပီ လာတာကျမထက်ကြာနေတဲ့ ဆေးရုံအုပ် ကကော လူနာတွေအတွက် လုပ်ပေးထားတာ ဒီလောက်ပဲလား။
စေတနာက ဒီလောက်ပဲလား။ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေး ထားစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်သာဆိုရင် ကိုယ့်အမျိုးသာဆိုရင် ဒီလို ပစ်ဆုပ်ဒေ ဝညစ်တီးညစ်ပတ် မွေးခိုင်းချင်လား။ ဒုတိယတချက် က baby warmer ပါ။ အဖြစ်သာရှိတဲ့ လေပူပန်ကာနဲ့ မွေးခန်းရော ခွဲခန်းမှာပါ သုံးနေရတာပါ။အလှူရှင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီး လှူသွားတာကို ဆေးရုံအုပ် ကို ပြန်အစီရင်ခံပါတယ်။ intend စာရွက်နဲ့ တင်ဆိုလို့ တင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တပါတ်တိတိ ရှိပြီ ပစ္စည်းချမပေးပါဘူး။ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး။
ပူတာအိုဆေးရုံက မှေးခနျး အကွောငျး လူနာရှငျ တဈယောကျရဲ့ မကွောကျတမျး ဝမျးနညျးဖှယျရာ ရငျဖှငျ့ခကျြ.
မပွောခငျြတာကမြကွောကျလို့ ငွိမျခံနမေယျ့ လူမဟုတျဘူးဆိုတာ သိထားပါ။ ကမြလူနာ နဲ့ ပတျသကျလာလို့ကတော့ ဘယျသူ့ကိုမဆို ဘယျအခြိနျမဆို threshold (ခံနိုငျရညျ) တခုရောကျရငျ သညျးခံမှာ မဟုတျပါ ကွိုပွောပါမယျ။ ဘယျသူမှ ပို့ဈဖကျြဖို့ လာမပွောနဲ့ မကွိုကျ ရငျ မဖတျ ပါနဲ့နျော။ပူတာအိုဆေးရုံအား ပထမဆုံး စိတျပကျြ မိခွငျး အကွောငျးကတော့၊ မှေးခနျး ရမေလာပါ, ပထမဆုံးပုံက မှေးတဲ့ ကိရိ ယာ instruments တှေ, မှေးပေးတဲ့ ဆရာဝနျတှေ ဆရာမတှေ လကျဆေးရတဲ့ ရကေနျပါ။
ရသေိုလှောငျထားတဲ့ ကနျထဲက ရှံ့ရတှေပေါ။ အဲ့တာ ကို တှတှေ့ခေ့ငျြး ကမြ ဆေးရုံအုပျကို ဖုံးဆကျပွီး complaint တကျပါတယျ။ကမြ စရောကျတဲ့နကေ့တညျးက အားလုံးလိုကျကွညျ့ပွီး အခါခှငျ့သငျ့တုံးကလညျး တခါပွောပွီးပါပီ။ခုဆကျတာ ညတခကျြပါ။ ဆရာပွောလို့ ရလားရှငျ့ လို့ အရငျမေးပွီး သူဘကျက ရပါတယျ ဆိုမှ ကမြ ဖုနျးပွောတာပါ။လူနာအတှကျ ဆရာဝနျက ၂၄ နာရီ အသငျ့ရှိရမယျလို့ ယူဆ ပါတယျ။ တှတေဲ့ပွဿနာကို on the spot ဖွရှေငျးလိုကျတာဟာအားလုံးအတှကျ အထိရောကျဆုံးပါ။
ဒါပမေယျ့ ဆေးရုံအုပျ ကမြဖုနျးကို ပွနျပွောလိုကျပုံက ခတျေ အဆကျဆကျ ဒါမြိုးပဲလုပျနကွေတာပဲ။ နငျက လာတာ ဘယျလောကျကွာ သေးလို့လဲဘာကောငျမို့လဲ လူနာတှအေတှကျ ဘာမြားလုပျပေးနိုငျသေးလို့လဲတဲ့။ ကမြ တတျနိုငျသလောကျ လုပျပေးနလေို့ကိုယျ့ လိပျပွာ လုံပါတယျ။ နောကျလညျးလုပျပေးမှာပါ။ ကမြက ပွီးပွီး ရောလုပျမယျ့လူ တဈနှဈကုနျသှားပွီးရော လုပျမယျ့သူလို့ ရှငျထငျရငျ မှားပါလိမျ့ မယျ။ ပွီးတော့ဟုတျပါပီ လာတာကမြထကျကွာနတေဲ့ ဆေးရုံအုပျ ကကော လူနာတှအေတှကျ လုပျပေးထားတာ ဒီလောကျပဲလား။
စတေနာက ဒီလောကျပဲလား။ ကိုယျခငျြးစာတရားလေး ထားစခေငျြပါတယျ။ ကိုယျသာဆိုရငျ ကိုယျ့အမြိုးသာဆိုရငျ ဒီလို ပဈဆုပျဒေ ဝညဈတီးညဈပတျ မှေးခိုငျးခငျြလား။ ဒုတိယတခကျြ က baby warmer ပါ။ အဖွဈသာရှိတဲ့ လပေူပနျကာနဲ့ မှေးခနျးရော ခှဲခနျးမှာပါ သုံးနရေတာပါ။အလှူရှငျနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျတှပွေီ့း လှူသှားတာကို ဆေးရုံအုပျ ကို ပွနျအစီရငျခံပါတယျ။ intend စာရှကျနဲ့ တငျဆိုလို့ တငျပါတယျ။ ပွီးတော့ တပါတျတိတိ ရှိပွီ ပစ်စညျးခမြပေးပါဘူး။ ကနျြတဲ့ကိစ်စတှတေော့ မပွောခငျြတော့ပါဘူး။